स्प्रे कोहरे सिंचाई प्रणाली आपूर्तिकर्ता र निर्माता - चीन कारखाना - Jianda
घर > उत्पादनहरू > Greenhosue प्रणाली > सिंचाई प्रणाली > स्प्रे कोहरा सिंचाई प्रणाली
स्प्रे कोहरा सिंचाई प्रणाली
स्प्रे कुहारी सिंचाई प्रणाली बहु फिल्म ग्रीनहाउस, पॉली कार्बोनेट ग्रीनहाउस सिंचाई, समय बचत, प्रान्तीय सिंचाई प्रणालीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ, वर्तमानमा विश्वमा व्यापक रूपमा प्रयोग र प्रचार गरिएको छ।
ग्रीन हाउसका लागि सिंचाई प्रणाली भनेको भूमि वा माटोमा पानीको कृत्रिम प्रयोग हो। यो कृषि बालीहरूको उब्जाउ गर्न, परिदृश्यको मर्मतका लागि सहयोग पुर्‍याउन प्रयोग गरीन्छ। सिँचाइ प्रणालीलाई दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ, ड्रिप इरिगेसन र स्प्रिंकलर सिंचाई।
हरियोहाउस वर्तमान समयमा खडेरी र पानीको अभाव क्षेत्रमा पानी बचाउने सिंचाइको सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो। पानीको उपयोग दर%%% सम्म छ। र यो फल स्ट्रबेरी रूखहरु निम्बू, चेरी, तरकारी टमाटर, काकडी, खुर्सानी, नगदी बाली र हरियोहाउस सिंचाइ मा लागू गर्न सकिन्छ। यससँग धेरै अन्य फाइदाहरू पनि छन् जस्तै पानी बचत, सिंचाई एकरुपता, उर्जा, माटो र भूभाग अनुकूलन योग्यता, सुविधाजनक खेतको काम ... आदि।
ग्रीनहाउस मुख्य प्यारामिटरको लागि स्प्रे कुहारी सिंचाई प्रणाली:
स्प्रे दूरी (मि)
फ्लो (एल / एच)
3.उत्पाद सुविधा र अनुप्रयोग
स्प्रे कोहरा सिंचाई प्रणाली with good strength for greenhouse planting:
परम्परागत सिंचाई विधिहरूको तुलनामा पानी बचत %०% हो
सुधारिएको उपज र बचत मजदुरहरू
रासायनिक प्रुफको कच्चा माल र एन्टि-पराबैंगनी किरणहरूको साथ उत्कृष्ट स्थायित्व
नर्सि solution समाधानको साथ खेती
तरकारी, फलफूल, फूलहरू, स्प्रे कुहारी सिँचाइ प्रणालीको लागि हरितगृह रोपणको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्मी क्षेत्रको तापक्रम कूलर राख्न सकिन्छ।
हरियोहाउस सहित स्प्रे कोहरा सिंचाई प्रणालीको लागि:
१ पानी पम्प
२. फिल्टरहरू, जस्तै स्क्रिन फिल्टर, डिस्क फिल्टर, केन्द्रापसारक फिल्टर
V ent / ââ € बाट २â € सम्म भेन्टुरी इन्जेक्टर
P. PVC पाइप र PE पाइप
Dri. ड्रिप लाइन र ड्रिप टेप
P. पीवीसी भल्भ र पीपी कनेक्टरहरू
स्प्रे फोग सिंचाई प्रणाली एक सरल सिंचाइ प्रणाली हो, तर यसले अन्य धेरै उपकरणहरू लाई पनि समेट्दछ: प्रोपोरन्टल इन्जेक्टर; बटन ड्रिप: स्प्रिंकलर: लाइन फ्लश भल्भ: एफई होज; पीवीसी होज; ड्रिप टेप र अन्य सामानहरू, छर्कने नली र सहायक उपकरणहरू।
FE समतल नली:
पीई पाइपसँग छिटो स्थापनाको फाइदाहरू छन्, कुनै खिया छैन, कुनै स्केलि, छैन, सुविधाजनक मर्मतस्यान र यस्तै। सिँचाइ प्रणालीमा यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। † १,, Ï, २०, Ï † २,, † †२, Ï †०, Ï †०, Ï †† साधारण विशिष्टता हो।
ड्रप एरो माटोविहीन संस्कृति, नर्सरी बीउ, कुँदिएको रोपण, हरित घरको बिउवामा लागू। तिनीहरू धेरै प्रकारहरूमा विभाजित गर्न सक्छन्, जस्तै: सीधा तीर, घुमाइएको एरो, एकल एर्रो, डबल एर र चार एर्रो र यस्तै।
सिंचन सिँचाइ भनेको पानी पम्प र पाइपलाइन प्रणाली वा प्राकृतिक पानीको स्रोतको भिन्नता हो, हावामा निश्चित दबावको साथ पानी छर्कने, साना पानीको थोपामा फैलाउन वा बोटबिरुवा र जमिनमा धुलो बनाउन। स्प्रिंकलर सिंचाइ लगभग सबै सुख्खा बालीहरूका लागि उपयुक्त छ, जस्तै अनाज, तरकारी, फलफूल, खाद्य मशरूम, जडिबुटी र यस्तै। दुबै सादाका लागि पनि पहाडमा लागू हुन्छन्, दुबै माटोको बलियो पारगम्यताका लागि, तर कमजोर माटो पारगम्यताका लागि पनि। बालीनाली, बगैंचा, फूलहरू, घाँसहरू मात्र होइन सिँचाइ गर्न पनि बालीहरू सिँचाउन सकिन्छ, यो मल, कीटनाशक, शीत, हीटस्ट्रोक, चिसो र धुलो स्प्रे गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Green दिनमा कन्टेनरमा हरियोहाउस डेलिभरीका लागि कुहिर सिंचाई प्रणाली स्प्रे गर्नुहोस्।
A: हामी कारखाना हौं, ग्रीनहाउसमा विशेष।
प्रश्न: तपाईको कारखाना कहाँ छ?
A: कारखाना किingजाउ शहर, शेन्डोंग, PR, चीन मा स्थित छ
प्रश्न: कसरी ग्राहकहरु को लागी सूट ग्रीन हाउस छनौट गर्न?
A: तपाईले हामीलाई भन्नु पर्छ, ग्रीन हाउसको क्षेत्र कुन हो? र कसरी स्थानीय स्थलाकृतिक स्थिति र मौसम अवस्था को बारेमा?
Q: तपाइँ नि: शुल्क डिजाइन प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
A: हो, हामी एक नि: शुल्क डिजाइन प्रस्ताव र सबै भन्दा उपयुक्त प्रयोग।
प्रश्न: तपाईंको वितरण समय कुन हो?
A: २०--30० दिन जम्मा भएपछि।
हट ट्याग: स्प्रे फोग इरिगेशन सिस्टम, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, थोक, खरीद, ब्रांड, गुणस्तर, कम मूल्य, छूट, अनुकूलित, सस्तो, चीनमा निर्मित, मूल्य सूची, उद्धरण, सीई, १ 15 वर्ष वारंटी
ड्रिप इरिगेशन प्रणाली